SAỤT AFRỊKA NA-EGBOCHI NDỊ NAỊJIRIYA CHỌRỌ ỊLA – hoo!haa!!
SAỤT AFRỊKA NA-EGBOCHI NDỊ NAỊJIRIYA CHỌRỌ ỊLA
Johanesbọg: Ndi ọrụ nchekwa mba Saụt Afrịka na anwuchikọzị ụmụ amaala Naịjiriya iji gbochie ndị chọrọ ịhapụ mba ahụ gbalata ụlọ ime otu ahụ.
Site n’ozi otu onye nọ n’ụlọ nnọchiteanya mba Naịjiriya na Johanesbọg zitere, ụlọ ọrụ ha akwadowo ibulata mmadụ narị atọ n’iri abụọ mana na ụlọ ọrụ njem ofesi (immigration) mba ahụ malitere ịchọ okwu site na ịkpụrụ ndị ahụ chọrọ Ịla ma bokwaa ha ebubo na akwụkwọ ha jiri bata obodo ahụ ezughị ezu.
“Ụgbọelu Peace nọ ebea kemgbe elekere anọ nke ụtụtụ na-asụfusi mmanụ ụgbọelu ebe ọ na-eche. Ndị ọrụ ime njem ofesi ha malitere na anwụchiko ndị Naịjiriya ndị chọrọ ịhapụ obodo a,na ha enweghị akwụkwọ iji bata obodo a.
” N’ime nkeji ise, sọọsọ mmadụ otu narị n’iri asatọ n’abụọ ka ha kwere banye ụgbọelu. Obi adịghị ha mma na Naịjiriya na-ebughachi ndị be ha. Ha achọghịkwa ka ụwa mara na ụlọ ọrụ ụgbọelu nakwa Gọọmenti mba Naịjiriya bụ ihe na-ebula ndị a.
Hmm, nsogbu ụwa. Saụt Afrịka kwesiri ịhọrọ otu. Ha agaghị ajụ ọgịga ma jụkwa ịcha n’ụzọ.
Previous Post: NDỊ ỌKAIKPE PDP MERE KA NDỊ NA-AMỤ ỌRỤ -OTEMU
Next Post: ỌTỤTỤ NDỊ GỌVANỌ PDP BỤ ‘NICODEMUS’ – WIKE